681 664 มุมมอง
မဂၤလာခုတင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး(အပိုင္း၃) - ျမင့္ျမတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္ ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ Myanmar Movies
New Hope Family Residence21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
khinlay khin9 วันที่ผ่านมา
သီချင်းလာတဲ့နေရာ ဘာလို့ ပိတ်ပြီး တီးလုံးလေးတွေ ထည့်နေရတာလဲ
Ko Naing Lin17 วันที่ผ่านมา
အၾကည္ေတာ္ ဝတၳဳ မိုးတိမ္ပံုျပင္ ပါ
saw saw26 วันที่ผ่านมา
StevinPau Sing27 วันที่ผ่านมา
ကျနော်ကြည့်ချင်နေတာ မတော်ပဲ တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ Subscribe လုပ်ထားတယ်😍😍😍😍
ဟားဟား ေပါက္စီကလဲ ႏြားႏို႔ ေရေရာတာပဲ ေျပာေနတာ
တင္ေပးတာေတာ့ ေက်းဇူးပါ မဟာ... ဇာတ္ဝင္ေတးက..မူပိုင္ခြင့္မရလို႔လားဗ်ာ...လုပ္ရက္တယ္...ၾကည့္ရတာHDနဲ႔ ေကာင္းေနၿပီကိုဗ်ာ...ဒီေနရာမွ...လုပ္ရက္တယ္ဗ်ာ....
Phyo Wai Aungหลายเดือนก่อน
Nu Tin Lwin Ooหลายเดือนก่อน
khaing thet monหลายเดือนก่อน
ရင်ဂိုဆိုတဲ့ နတ်သမီးသီချင်းနဲ့သရုပ်​ဆောင်တာကို ဘာလို့တီးလုံးကြီးထည့်လိုက်တာလည်း
THANT SIN AUNGหลายเดือนก่อน
ပြည်ပကနေ ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက် လစဉ်ပေးချေမှု ဒါမှမဟု ဘလို ဝန်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ ကြည့်လို့ရလဲ မသိဘူး ခင်ဗျ admin
Maharက facebookမွာ မတင္ဘူးလားခင္ဗ်ား သိခ်င္လို႔ပါ
Htet kaung Kyawหลายเดือนก่อน
အပိုင္း ၄ တင္ေပးပါ ခင္ဗ်ာ
koko win koko winหลายเดือนก่อน
အပိုင္း4လာဘီ လား ဘယ္အခ်ိန္လည္းဗ်
အပိုင္း 4အျမန္ဆုံး ေလးတင္ေပးပါ။
pyae phyo โจโจหลายเดือนก่อน
Ko ko Lwinหลายเดือนก่อน
Khin Mar Myintหลายเดือนก่อน
San San Htayหลายเดือนก่อน
Mahar app မှာမတင်သေးဘူးလား
သတိအႏၲရယ္ ရိွသည္ ဇာတ္ကားတင္ေပးပါလား
Part four please mahar.
Wai Yan Mหลายเดือนก่อน
အပိုင္း 4ကို ေမ်ာ္ေနပါၿပီဗ်😇
Bad Boy Bad Boyหลายเดือนก่อน
Oo Lay Gyiหลายเดือนก่อน
မျှော်နေတာ အပိုင်း 4
hahahaha please part 4
Yan Paing Sawหลายเดือนก่อน
U Moe Zawหลายเดือนก่อน
ေက်းဇူးပါဗ်ာ အပိုင္း၄တင္ေပးပါဦးဗ်ာေစာက္ေမ်ွာ္ေနမယ္ေနာ္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ
ဘာလို႔ သီခ်င္းေနာက္သံေတြေျပာင္းလိုက္တာလဲ ?
မဟာ app ထဲမာ 23 ရက်နေ့တင်မယ်ဆို အခုထိမတွေ့သေးဘူး
Love Mst Mstหลายเดือนก่อน
Mahar Apk မွာဝင္ၾကည့္တယ္..အဲ့ဇာတ္ကားမ႐ွိဘူး
Saw lay Ooหลายเดือนก่อน
Than Naing linหลายเดือนก่อน
Fly Boyz Channelหลายเดือนก่อน
white love white loveหลายเดือนก่อน
Can’t wait for part3😍 Myint myat is the best !!
Nau Thawng JNหลายเดือนก่อน
မူရင်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇတ်ကားတွေတောင် Mahar ရောက်သွားတာနဲ့ အဲ့ဇတ်ကားပျက်ရော ဇတ်ဝင်တေးတွေ ဖျက်ထားရလောက်အောင် အဆိုတော်တွေက Mahar မှာ မူပိုင်မပေးလို့လား ကြည့်ရတာ အရသာပျက်
လခွမ်း youtube မှာ Video တင်ရင် Copyright မိတယ် ​ဆိုတာ ကြားဖူးရဲ့လား ​စောက်ဆရာကြီး​ရေ့ ပရိုဖိုင် နဲ့ စာ နဲ့ လိုက်ပ ကွာ..
Ba gyi Aungหลายเดือนก่อน
Ma Ma??? Layหลายเดือนก่อน
Nya Min Thar Layหลายเดือนก่อน
Ad တြေက THworld App ကဝင်ဆိုတော့ Baby လည်းမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် Baby😬😬 အားပေးမှုအတွက် မဟာတီဗီ(မဟာရုပ်သံလိုင်း)မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်😍😍နောက်ထပ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားရှိရင်လည်းပြောပေးသွားနော် မင်မင်က တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်😍😍 Mahar Entertainment မှာလည်း ဟာသဇာတ်ကားလေးတွေ တင်ဆက်ပေးထားလို့အားပေးပါဦးနော်😍😍
တစ္ခါထဲစဆံုးတင္ပါလား မဟာကိုအားေပးတဲ့သူေတြကို သက္သက္ဂ်င္းထည့္သလိုျဖစ္ေနတယ္
ဂ်င္းထည့္တယ္လို႔ထင္ရင္လဲမၾကည့္နဲ႔ေပါ့broရယ္ အလကားလဲၾကည့္ရေသးတယ္ အခ်ိန္ေတာ့ေစာင့္ရမွာပဲ သူမ်ားလဲၾကည့္႐ႈသူအေရတြက္နဲ႔အားေပးမႈအေရတြက္ေတာ့မ်ားမ်ားလိုခ်င္မွာပဲ အစဆံုးၾကည့္ခ်င္ရင္ပိုက္ဆံေပးဝယ္ၾကည့္လိုက္ပါ အလကားၾကည့္ခ်င္ရင္သူတို႔တင္တာကိုေစာင့္ၾကည့္မၾကည့္ခ်င္လဲေန အတင္းလဲမၾကည့္ခိုင္းဘူး...ေနာက္ေဝဖန္ခ်င္ရင္ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွေဝဖန္တာေကာင္းဆံုးပဲ မဟုတ္ရင္broကိုသူမ်ားျပန္ေဝဖန္တာခံရလိပ္မယ္
အစအဆုံး ကြည့်လိုပါက မဟာ အပ်ပလီ​ကေးရှင်းမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် လို့ မြန်မာ လို ​ရေးပြထားတာပါ မြန်မာစာကို မြန်မာ လို​တောင် မဖတ် တတ်ပဲ ​​​ဝေဖန်ချင်​နေတာလား အညာဘက်လူ ပီသပါ​​ပေတယ်
@မဟာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 😁😁
မင်္ဂလာခုတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး(အပိုင်း၂) - မြင့်မြတ် ကျော်ကျော်ဗိုလ် ဝတ်မှုံရွှေရည် Myanmar Movies
มุมมอง 121 813
မင်္ဂလာဦးည ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အပိုင်း(၁) ကျော်ရဲအောင် အောင်ရဲလင်း သက်မွန်မြင့် အေးမြတ်သူ Love Funny
မြန်မာဇာတ်ကား - မြူတစ်မှုံ - မြင့်မြတ် ၊ ဝတ်မှုံရွှေရည် - Myanmar Movies - Love - Drama - Romance
ရန်ဖြစ်ပြန်ချစ် (အပိုင်း ၁) - မြင့်မြတ် - မြန်မာဇာတ်ကား - Myanmar Movie
Lavender Myanmar Entertainment
မြန်မာဇာတ်ကား - ချစ်ခွင့်ရှိသည် - မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် - Myanmar Movies - Love - Drama
Shwe Sin Oo | IP Pu Kwa and Ta Mhu Sar A Lwae Myar | အိုင်ပီပုကွနှင့်တစ်မှုစာအလွဲများ
สปอยอนิเมะ!!!✨สึคาสะชอบพระเอกที่ตรงไหน???😳จะยังไงภรรยาผมก็น่ารัก Tonikaku Kawaii ตอนที่9
มุมมอง 61 042
มุมมอง 117 704
มุมมอง 793 674
มุมมอง 583 956
มุมมอง 892 269
ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค | ตั๊กแตน ชลดา | 1 ธ.ค. 63 [4/4]
มุมมอง 31 034
มุมมอง 64 988